Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U.: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 12 Novambra 2019	• 24 Comments
Izay rehetra mbola mahatadidy ny famonoana ny minisitra teo aloha Els Borst ary mbola tsy nahalala ny momba ny foto-kevitry ny PsyOp tamin'izany fotoana izany dia mety ho gaga be ihany. Novonoin 'i Borst izay novonoin' lehilahy mifangaro '. Farafaharatsiny dia efa elaela vao nahalala ny NFI fa misy heloka bevava, na dia hita fa i Borst dia hita tao anaty dobo ra. Efa eto ihany isika izao, satria ny fantatsika momba ny raharaha toa izao dia ny tantara sy ny sary ao amin'ny haino aman-jery ary fantatsika izao fa, ohatra, dia eo an-tanan'ny mpanamboatra fahitalavitra ny Algemeen Nederlands Persbureau (ANP); olona manana studio amin'ny sarimihetsika ary an'arivony tapitrisa ao amin'ny kaontiny bankiny. Ary noho izany dia tsy afaka hiteny ianao fa ny tranga famonoana toy izany dia tsy natambatra ho toy ny sarin-tsarimihetsika fotsiny hanomanana ny vahoaka amin'ny fepetra vaovao ataon'ny polisy.
Op March 11 2014 Nanoratra momba ity resaka Els Borst ity aho:Fa miambena, satria alohan'ny hahafantaranao azy dia eo am-baravaran'ny vavahadin'ny GGD ny fidirana an-tery. ”Mariho fa ny D ho an'ny 'serivisy' dia efa nosoloina ny fehezanteny Z noho ny 'fikolokoloana'. Ao amin'ny 2018, izay efa nampitandremako azy dia efa tanteraka. Tena mahaliana tokoa ny mahita izay tranga voalaza ao amin'ny antontan-taratasy minisitra manambara ireo fepetra ireo? Eny, marina i Els Borst sy ilay namono azy hoe Bart van U.
Izao dia hiteny ianao hoe:Eny, saingy voaheloka i Bart van U, efa nogadraina nandritra ny taona maro nandritra ny 8 ary nahazo TBS niaraka tamin'ny fitsaboana an-tery, ka tena marina izany". Ny mampiavaka ny PsyOp dia ny lalao iray manontolo avy ao amin'ny A ka hatramin'ny Z fiaraha-miasa amin'ny politika, ny fahamarinana ary ny media; ao anatin'izany ny fampahalalam-baovao manodidina ny fitoriana toy izany. Amin'izay vao hoentina amin'ny fomba fandraisana ny olona ny fampidiran-javatra izay tsy eken'izy ireo mazàna, fa izao kosa mitaona toy ny 'ilaina'. Ao amin'ny PsyOps, ny maxim dia mandrakariva 'Olana, fihetsika, vahaolana«ampiharina, izay midika fa ny olana mikasika ny fiantraikany ara-tsosialy lehibe dia noforonina mba hanaita ny fihetsik'ireo hatezerana sy ny fihetseham-po lehibe amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao sy ny politika, ary avy eo hampidirana vahaolana izay efa teo amin'ny talantalana. Ka raha afaka mandresy lahatra ny olona ianao fa ny 'lehilahy mikorontana' dia namono an'i Els Borst, ianao no manana alibi tonga lafatra hanidy ireo olona mikorontana. Moa ve i Bart van U. ny toetra amina script PsyOp voatery niomana amin'ity lalàna ity? Eny, voambara mazava ny tatitra farany olona mifamadika amin'ireo olona mifangaro amin'ny fisafotofotoana avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana, Fahasalamana ary Fanatanjahantena:
Noho ireo fanoloran-tena ireo dia natokana ho an'ny trano ambony sy trano ambany indrindra ity taratasy ity. Vao haingana ianao dia nahazo tatitra an-tsehatra avy amin'i Andriamatoa Hoekstra momba ny fepetra fanatsarana taorian'ny fanadihadiana momba ny raharaha Bart van U.
Ary inona koa no misy ao anatin'io taratasy io? Ny taratasy dia manome torolàlana ny faritra GGZ rehetra hividy psycholance. Ny fiara manana fitaovana manokana haka an-tànana ny 'olona mikorontana'. Ny toe-tsaina toy izany matetika dia nanodinkodina ny varavarankely ary manana fitaovana azo ampiasaina ao anaty kabinetra mba hamatorana olona tsy am-pilaminana. Mety mitombina ianao, satria mety hiady mafy ny olona mikorontana toy izany. Taorian'ny raharaha Ane Faber, dia resy lahatra tanteraka ny fampidirana an'ity fitsaboana ity ary ny raharaha Thijs H. dia voajanahary ihany koa fa nitondra ny sary fa feno ny olona very saina ny firenentsika. Amin'ireo tranga roa ireo dia efa nolazaiko mialoha fa hanaparitahana ireo mpanohitra ny fiarahamonina amin'ny fanomezana azy ireo ny stigma 'olona misafotofoto'.
Ny taratasy avy amin'ny ministera dia misy zavatra mahavariana ary manantena lalàna vaovao hasaina hiditra. Azafady vakio ity singa etsy ambany ity ary tadidio fa ao amin'ny bokiny 1984 George Orwell dia miresaka momba ny 'antoko' nanova ny dikan'ny teny. Izy no miantso izany "kabary vaovao" izany (antsoina koa hoe "fiteny roa"). Mahavariana foana fa voafidy ny teny hoe 'fikolokoloana', amin'ny zavatra iray, raha mandinika ao anaty andrim-panjakana GGZ ianao, somary tsy mitandrina, fa indrindra amin'ny 'nogadraina raha nitantana fanafody'tsy maintsy atao. Izany no nampidirin'ny mpanoratra ny tatitra amin'ireo zavatra hafa ho torohevitra ao anatin'io taratasy io:
Ny trangam-piasana izay ilain'ny fifandraisana bebe kokoa dia azo atao: lalàna mifehy ny asa, satria ireo dia eo amin'ny dingana fampiharana ary mamaritra ny fandaminana ny fikarakarana ampahany lehibe amin'ny tarika kendrena.
Betsaka ny zavatra tokony tsy maintsy anaovana lalàna momba ny fanekena an-tery (satria ny trangan-javatra dia efa nahatratra ny ambaratonga fampiharana - fohifohy: efa mitranga izany raha tsy misy ny lalàna). Izay no mampatsiahy azy volavolan-dalàna nataon'i Edith Schippers izay nananganako fanangonan-tsonia teo ambanin'ny kabinetra teo aloha mihoatra ny dimy arivo mahery nosoniavina. Ny volavolan'ity volavolan-dalàna ity dia midika fa ny olona izay mahatsapa fa mety ho sahirana dia azo alain'ny mpitsabo tsy misy fitsabahan'ny mpitsara na ny mpitsabo, ary ny ora 18 dia azo atsipy ao anaty efitrano iray hanaovana fandinihana (miaraka amin'ny mety hitantana azy " fanafody ”). Io lalàna io dia mbola tsy nolanina tamin'io fotoana io, saingy ny fambara amin'ity taratasy minisitra ity dia mazava fa tena efa nieritreritra ny hanana an'io lalàna io izy. Ary noho izany dia mila PsyOp-jes vitsivitsy izahay mba hitondrana ny vahoaka bebe kokoa hatrany amin'ny làlan'ny fanekena. Ireo mpiasan'ny GGZ koa dia tsy maintsy resy lahatra fa raha tonga ara-tsaina dia mety ho tsara amin'ny zavatra iray.
Mazava ho azy ny momba ny famaritana ny 'olona mifangaro'. Rehefa misy olona mifangaro? Tsy misy afa-tsy rehefa mamono tovovavy iray ianao hivezivezy amin'ny lalana ANWB eo amin'ny bisikileta irery ao anaty tafio-drivotra ary hanipy azy amin'ny fefin'ny toby miaramila taloha handevina azy, hihady azy ary atsipy ao anaty fiaran'ny reninao. fitaterana handevina azy indray? Izany ve rehefa rehefa manindrona alika mpandeha an-tongotra satria mahazo andraikitra avy amin'ny demonia? Sa ianao olona very hevitra ihany koa raha manana fibaiko fitondran-tena manohitra ny fanoherana ary tsy mitovy amin'ny an'ny fanjakana ny hevitrao?
Ny tena nandresy lahatra ny vahoaka dia ny tranga tafahoatra hitantsika teo amin'ny haino aman-jery; ireo tranga izay heveriko fa mety ho fandidiana ara-tsaina (PsyOps). Na izany aza, ny fampiharana dia rehefa rehefa manambara ilay lalàna ao amin'ny taratasim-minisitra dia efa ho avy ny fotoana, afaka miantso ny aretin-tsaina ny olon-tianao ary milaza fa mety ho sahiran-tsaina. Avy eo ianao dia azo alaina tsy misy fitsabahan'ny mpitsara na mpitsabo aretin-tsaina. Ny Ruinerwold dia nanantena ny haino aman-jery an'ny fianakaviana izay efa nametraka ny fototry ny fanesorana ny tokonam-baravarana amin'ny tsy fananana ny fahazoana karama fikarohana. Afaka mandeha miaraka amin'izay ianao, toy ny 'rain'ny matoatoa' ny 'fianakaviana matoatoa' ary hatao voahidy ho fanaraha-maso.
Soa ihany, ny toe-javatra rehetra dia miseho amin'ny fomba marary avokoa. Tsy hisy hitaraina ny mpifanila trano aminao. Rehefa dinihina tokoa, dia toa ambulance, ilay fiara mpitondra entinao. Nanamboatra varavarankely izy io ary mifatotra tsara ianao. Angamba izy ireo mandre anao sahirana kely, fa ny mpiara-monina aminao ihany koa dia efa nomanina amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao ary tsy ho gaga. "Nanana hevitra hafahafa foana ianao"Dia hiteny izy ireo. Ao amin'ny lahatsoratra iray GGZ andrim-panjakana Mondriaan avy amin'i Heerlen dia hitantsika izao manaraka izao momba ny fomba fitateranao ho toy ny olona misafotofoto mety hisafotofotoana (diniho fa tsy mbola nisy napetraka, fa mety ho diso hevitra na ho sahiran-tsaina ianao).
Ilaina ny fitaterana sahaza satria ny olona tsy nanao heloka bevava dia tsy miditra ao anaty fiara de polisy. Ankoatr'izay, matetika dia tsy ilaina ny ambolimbola amin'ity tranga ity. Amin'ny fampiasana fitaterana mety dia entin'ny olona arak'asa amin'ny fomba milamina sy mahafinaritra ary tsy mampanan-daka ireo olona ireo. Nisy ny famatsiam-bola natolotra ho an'ny mpanamory fiaramanidina tsara iray nataon'i ZonMW mandritra ny herintaona. Mandritra io vanim-potoana io, dia hodinihina matetika hoe oviana ary rehefa ampiasaina ny fitaterana mety.
Ao amin'ny lahatsoratra iray RTV Drenthe avy amin'ny 14 Aogositra 2019 dia hitantsika fa nitaona matetika ny fikosoham-panahy. Avy taiza daholo ireo olona sahiran-tsaina ireo? Na izany na tsy izany dia efa hitanay teo amboniny fa misy vilany famatsiam-bola novohana ho azy, ka toa misy fiantraikany mandrisika izany. Ny psycholance dia nisintona saika 2018 im-betsaka tany 900, ary toa somary miady izany. Saingy araky ny efa voalaza dia efa nandrafitra ireo fampahalalam-baovao miaraka amin'ny sary fa mitombo ny herisetra ao amin'ny fiaraha-monina. Ohatra, tamin'ny herinandro lasa dia hitanay fa nitombo ny herisetra amin'ny mpiasan'ny fikarakarana tanora. Moa ve tsy marika fotsiny ve izany fa nihombo ny horohoro avy amin'ilay noraisim-peo Orwellian tena tsara tarehy? Izahay mitory fanafihana madio ao amin'ny GGZ sy toby fanabeazana indray ao ambadiky ny varavarana fidirana mahafinaritra antsoina hoe "fikolokoloana tanora" (jereo eto)?
Na izany aza, ny polisy dia tsy maintsy manampy tsy tapaka amin'ny lafiny fahasalamana. Avy eo ny mpandraharaha iray dia mitondra fiara ho an'ny fiarovana ny mpiasa. Amin'ny taona faharoa izay mihazakazaka ny aretin-tsaina, dia hita ny fitomboana kely amin'ny famoretana. "Mazava ho azy ihany koa izany satria mitondra fiara bebe kokoa isika, fa ny mpitandro filaminana koa dia mahalala ny toerana hahitanay", hoy i Hendriks.
Tamin'ny Firaisana Sovietika teo aloha, ireo olona nanohitra ny hevitra napetraky ny fanjakana dia nantsoina hoe mpanohitra. Ny tantaram-pianakaviana Ruinerwold 'dia nitondra ny fanilikilihana olona izay tsy manaiky ny fomba fanabeazana nataon'ny fanjakana. Ireo dia olona mino ny matoatoa sy ny olona manana ny zaridainany manokana. Sectarian ny 'rainy matoatoa' araka an'io tantara io (tena azo inoana) PsyOp. Hitantsika eto ny fanomanana fiarahamonina eto. Ny mponina dia novolavolaina indray amin'ny fotoana fanao. Tianin'ny fanjakana ianao hitatitra ny manodidina anao. Mety ho olona manana “fitondran-tena mamitaka” izany. Ohatra, amin'ny ho avy dia mety tsy hanaiky ny fampianarana momba ny fampianarana any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ianao, izay ampianaran'ny zanakao fa tsy lahy na vavy izy, fa mbola afaka mifidy ny lahy sy vavy. Ny PsyOp matoatoa Ruinerwold 'dia efa namorona ny stigma fa rehefa entinao any an-tsekoly ny zanakao, dia mety ho olona misavoritaka ianao izay "manamboatra" zanakao. Ary raha diso hevitra ianao, dia mety hitondra anao tsy ho ela ny fikorontanana.
Hitantsika ve ny fanesorana ireo mpanohitra eo ambanin'ny fitenenana hoe "mety hisavoritaka" sy 'fikolokoloana'? Joseph Stalin dia nihomehy fatratra teo am-pasany ary hidera ny fanjakana holandey noho ny fomba feno habibiana izay nahalany nivarotra an'io tamin'ny olony. "Notaterina amina fomba azo antoka sy mahafinaritra, tsy misy fanilikilihana, matihanina". Miverina ny gulag fa ao anaty palitao 'fikolokoloana'. Ary ny mpiasa GGZ? Eny, tsy maintsy mandoa ny trosany koa izy ireo. Tsy manelingelina ny fanontaniana hoe nahoana ny olona no tokony alaina. Tsy maintsy ilaina ho an'ny zavatra ary ireo olona nanangona "olona misavoritaka" dia ho tony haingana rehefa nahazo ny tsindrona voalohany. "Asa ny asa, vola ny vola, raha tsy manao izany aho dia hisy olon-kafa". Befehl dia befehl.
Vidio ny boky vaovao «Ny zava-misy araka ny fahitanay azy» dia fantaro ny fitaka rehetra ka tadiavo ny vahaolana voasoritra.
Lisitry ny rohy loharano: mondriaan.eu, rtvdrenthe.nl
Ny adihevitra momba ny volavolan-dalan'i Edith Schippers androany noho ny fisamborana tsy misy fitsarana
Tags: herisetra, Bart, tratra, Alder, Featured, Fahasalaman'ny Saina Care, iray, vonoan-olona, tranga famonoan'olona, olona, psycho Lance, fanafihana, fanafihana, fanampiana, U., dia, faharesen-dahatra, sahiran-tsaina
12 Novambra 2019 ao amin'ny 13: 45
Ny tena nitranga tamin'io Ruinerwold 'fianakavian'ny matoatoa' io. Saotra lehibe nandritra ny fotoana kelikely, ary tsy misy intsony. Namboarina tambonin'ny tany ??
12 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 53
Aiza ny mpamboly? Ny tontolon'ny fananganana? etc.
"Kaltgestellt? Eny, azo atao tokoa fa avela ihany ny fihetsiketsehana ary indrindra indrindra raha tarihan'ny Fanjakana na avy amin'ny solontenan'ny Fanjakana izay 'faharoa' ireo fikambanana. Toa ny DDR teo aloha ihany. Tsia, tsy mety raha tsy eto. Kuch.
13 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 37
Ny tantsaha dia niditra amina resaka nifanaovana tamina fiaraha-monina / sôkôpôra, isaina amin'ny tombotsoanao.
12 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 49
Hoy aho foana fa ny fisainana ara-pahefana maimaim-poana dia manohina lalina ny salan'isan'ny mponina Madurodam ... Ny zanatany masira, taiza daholo ireo toby fitanana ireo?
12 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 22
I East sy West dia niovaina. Ny rindrina dia nianjera 30 taona lasa izay, saingy efa eo tokony ho hatsangana indray ny rindrina. Jereo Amerika, jereo ny Eropa Atsinanana ary amin'ity indray mitoraka ity ny Westerners. Arakaraka ny nanoratanao matetika dia mamorona olana momba ny mpitsoa-ponenana ianao ary miantsoantso ny rindrina ny olona ary tsy takatr'izy ireo fa mihidy anao ny rindrina. Mieritrereta fa izany no antony tian'i Trump hividy Greenland, hanavaka ny zava-drehetra, tsy afa-mandositra intsony. Lalao noana, fampisehoana zava-misy.
12 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 59
Atsinanana dia fanandramana nataon'ireo tovolahy izay nahatsikaritra fa tsy natao mba hampahodinin'ny olon-tsotra ny mponina. Mba hitazomana hatrany ny fisehoana dia mody nanatsoaka hevitra ny zazalahy fa latsaka i Atsinanana. Tsy misy setroka, setroka ary fitaratra. Ny zazalahy moa dia mbola any Atsinanana ihany. Ny fianjeran'ny Atsinanana dia natao hanatratrarana rafitra roa, kapitalisma ary sosialisma, miaraka amin'ireo bandy ambony indrindra mandrindra tsara. Atsinanana sy Andrefana gulag lehibe.
13 Novambra 2019 ao amin'ny 14: 04
masoandro, tsy holazainao amiko hoe ny 'phase final' 11 / 9 / 1989-9 / 11 / 1989 / ny fanandramana dia nitaina ary 'nimaso tanteraka' ny haka azy indray. Ah adino tanteraka i Ah, aorian'izay rehetra nalahelo anay miaraka amin'ny Politburo any Brussels.
Te hifamadika andraikitra indraindray ny vehivavy sy ny tompondakan'ny script. Dia mitazona ilay zavatra rehetra mampientam-po, sa tsy izany? Raha tsy izany dia malahelo ianao amin'ny ady mangatsiaka izay tsy te ho mafana intsony ... 😀
ps: Ilay rakitra STASI tamin'ny fanombohan'ny 1990 dia tsy tafapetraka avo tao Berlin ho lasa isaina ihany? ... Tsy mbola masaka ny fotoana, toa tonga teo ny vanim-potoana ankehitriny [Herausnehmen sy fitsapana]
13 Novambra 2019 ao amin'ny 14: 12
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosemarie_Albrecht (Fianakavian'i Ursula 😉?
13 Novambra 2019 ao amin'ny 17: 47
Ny izao tontolo izao dia tena gulag miaraka amin'ny zazalahy na aiza na aiza mitazona toerana ambony. Hadinon'izy ireo foana fa mpikambana ao amin'ny klioba ho an'ny sarambabem-bahoaka ireo, fa eo amin'izy ireo dia samy mifankahalala sy momba ny fanondroana anarana ary fanovana anarana sns. Manoro hevitra koa izy ireo.
Betsaka ny zavatra ambara momba azy ireo fa eny miaina ao anaty jadona izahay ary tsy tia an'izany izy ireo rehefa milaza ny zava-misy ianao. Izy ireo dia manana ny teny avo indrindra indrindra, mahalala tsara ny zava-drehetra, isaorana foana, bla, bla, bla. Mazava ho azy fa tsy tian'izy ireo ny manontany ny famaritana tsy an-kiato ny tovolahy amin'ny toerana misy azy ireo, ary tena 'elite' mpifindra monina izy ireo. Mety hanelingelina ny tombontsoany sy ny toerana misy azy ireo izany.
13 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 26
psycholance vetivety foana na aiza na aiza
13 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 53
Zoky a, inona no tantara!
Latsaka tao anatin'ny fandrika amin'ity tranga marina ity i Agatha Christie na mpanoratra hafa
Andriamatoa Stoker avy any Alkmaar 🙂
STOKER. “Roa volana lasa izay dia nanao tabataba be izy ny hariva. Tsy maintsy milalao baolina ny ampitson'iny, ka manontania izy raha te ho malefaka kokoa. Avy eo dia nihazakazaka tao aoriako niaraka tamin'ny antsy an-dakozia roa aho. Notsoriko tampoka ny varavarana tamin'ny ora. Indro, lehibe aho, nefa tsy mahazo antsy aho. "
14 Novambra 2019 ao amin'ny 13: 10
@Marga, nihevitra an'izany ve ianao? izahay dia niresaka momba ny psikolojia
lasa lavitra be izao
Ratsy tokoa, voatifitra mihitsy aza izy!
14 Novambra 2019 ao amin'ny 13: 25
Raha sendra mandositra dia tsy voatifitra faingana ilay liona.
Rehefa dinihina tokoa, ny vehivavy dia mety nanana tifitra fanatoranana voalohany.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 13: 28
Ny tantara rehetra momba ny haino aman-jery mba hahatonga ny olona zatra ny herisetra ataon'ny polisy amerikanina.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 31
Ary mandeha an-tongotra kilaometatra fanampiny izy ireo:
Raha resaka resaka fanamiana dia tsy ambany noho ny filma dystopian sci-fi avy any Hollywood.
13 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 31
Ka maimbo io raharaha io, mety ho mazava ... Tontolon'ny kolontsaina mbola tsy mbola nahare na oviana na oviana aho ho an'ny rehetra 😀 Tsy ho ela dia hamafa amin'ny sakelika rehetra ny papana, tsy maintsy ho rava ny fanoherana.
_ Nisy mpitondra tenin'i Veldzicht nilaza tamin'i RTV Oost fa ilay mpamono voarohirohy dia tany amin'ny faritra heloka bevava tao amin'ny klinika ary nahazo fitsaboana aretin-tsaina. Tokony heverina avy any am-ponja izy.
_Ny mpitsabo dia mitsabo ireo marary manana fizahana kolontsaina.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 01: 24
Heroepvoedingskampen, nadikan'ny milina fandefasana gazety George Orwell dia antsoina hoe: fikarakarana ara-tsaina Transcultural
Wow! Ary ny mpiasa rehetra dia samy resy lahatra ny tenany fa manome fikarakarana tsara. Tatitra am-pitenenana sy fifampidinihana vondrona miaraka amin'ireo mpitantana
Raha misy olona tezitra noho io fampianarana io indray, dia milaza izahay fa "tsy maintsy mandeha any amin'ny efitra tony" ianao.
Ny Sadism dia namboarina ho fiheverana.
“Ry dadanay, nokarakarainao ve ireo olona mahafinaritra rehetra niasa androany? Nanamboatra ny fangaro taminao ve ianao? "
Tsy olana fa resaka fonja io. Misy hidona eo amin'ny varavarana vy matevina. Fonja ity (averiko indray). Jereo kely hoe inona ity: gadra ity. Toby fampianarana indray. Izany no niantsoana an'i Alemania Nazi tany amin'ny toby fitanana '40 /' 45, fa avy eo tamin'ny akanjo fikarakarana milamina. Io no niantsoana ny hoe "gulag" tao amin'ny Sovietika. Misy ny mpanohitra eo ambanin'ny lohateny hoe "marary aretin-tsaina".
14 Novambra 2019 ao amin'ny 01: 28
Ankoatr'izay, izy ireo dia misy sary fakantsary vita amin'ny klinika izay mety ho tafatsangana avokoa hamorona ny fahatsapana fa tena mamy sy olombelona izany.
Antsoina hoe Propaganda.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 01: 43
Jereo ny fantsona YT ary jereo hoe oviana ny sary vao navoaka vao tamin'ity herinandro ity. Misy fanafintohinana voafehy ao amin'ny haino aman-jery mba hametahana ny fomba fijerin'ny ony mora vidy.Ny serivisy (andrim-panjakana mpitsara) dia miaro ny olom-pirenena tsara amin'ny zavatra rehetra manalavitra ny toerana misy azy. Standard.
Eto dia misy sombin-dàlana iray hafa tsy zakan'ny olona ny mametraka anarana eo ambaniny. Izany dia tsy maintsy mandalo ho an'ny asa fanaovan-gazety, iza no manome ireo karazana sombintsombiny ireo? minus 'fahamarinana' ary 'filaminana' angamba ...
14 Novambra 2019 ao amin'ny 02: 02
Eny tokoa, tantara mahafinaritra indray izany fa ny latabatra fisakafoanana antonony dia hanaiky ary hino ny tiana holandey nisotro kafe, satria ny asa fanaovan-gazety ary dia ho marina izany ... "Azo antoka fa tsy manao izany ry zareo"
14 Novambra 2019 ao amin'ny 02: 09
Izy io dia mifandrindra ary afaka asehoko amin'ny alàlan'ny fikarohana tsotra ara-tantara.Vita mihoatra ny 6 taona lasa izay teo ambany fitarihan'ny mpikambana VVD Opstelten
Fanamarihana ireo olona nisafotofoto
Fikoloana nanova ny ekipa diso
Fanokafana ny fiaraha-miory 30 / 09 / 14 Fanamarihan'ny olona misafotofoto;
"Azo atao izany!" Hoy ny Minisitra I. Opstelten
14 Novambra 2019 ao amin'ny 02: 13
... ity psychopath ity
Ny minisitra Opstelten dia namaly ny loka Big Brother Award
Hery NLP, Hery
30 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 26
Angamba efa fantatry ny maro ny momba azy, fa vaovao amiko io!
Nosokafana ny mpamosavy taonjato 21! Mbola fandraisana an-tanana hatrany ireo eto an-toerana mba hahafahantsika hitady tsimoramora eo am-pijerena sy harahintsika ny fitondran-tena amin'ny governemanta. Raha izany no fenitra vaovao, azo antoka fa hahazo isa laharam-pirenena isika.
Avelao hanomboka hunt
30 Novambra 2019 ao amin'ny 18: 04
@ Nahoana no mila ...
Jeeeesus krist dia misaotra ny fanehoan-kevitra, tsy azo tanterahina, antena be vazivazy.
Fa ho !!!
Azontsika atao angamba ny milaza an'i Opstelten en masse ho olona very saina.
Ary misy vitsivitsy vitsivitsy ;-), Nieuwkerkje ary ny maty Nek etceeeteraaa ...
Fantatro fa tsy tokony hampiasa an'ity rafitra ity isika fa ny lavaka nolavon'izy ireo dia avela hilatsaka ho azy ireo, fa hitranga amin'ny zafikeliny izay tampoka tampoka.
« Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny fanjakana sy ny heloka bevava proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman)
"Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl »
Total visits: 14.725.251
Martin Vrijland op Ny fanerena ananan'ny ankizy dia lehibe!
Zonnetje op Zoma Purple: ahoana ny fomba ananan'ireo ankizy any an-tsekoly ny fampielezankevitra LGBTI
ZalmInBlik op Zoma Purple: ahoana ny fomba ananan'ireo ankizy any an-tsekoly ny fampielezankevitra LGBTI